मंगल ग्रहमा पहिरो गयो ! - Everest Dainik - News from Nepal
मंगल ग्रहमा पहिरो गयो !
काठमाडौं । मङ्गल ग्रहमा पहिरो गएको छ । हरेक वसन्त ऋतुमा मङ्गल ग्रहको उत्तरी ध्रुवमा हिमपहिरो जाने गरेको हो। सूर्यको प्रकाश परेपछि त्यहाँ हिमपहिरो जाने गरेको एक अनुसनधानले पत्ता लगाएको छ ।
अमेरिकी अन्तरीक्ष अनुसन्धान केन्द्र नासाले मङ्गल ग्रहमा हिमपहिरो गएको तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ । तापक्रम बढ्न जाँदा हिउँमा पग्लिदा पहिरो गएको हो । यसको रङ्ग रातो हुन्छ । पहिरो जाँदा दृश्य निकै रङ्गिन देखिन्छ ।
याे पनि पढ्नुस पहिरोका कारण मुग्लिन सडक अवरुद्ध
तस्बिरहरु मङ्गल ग्रहमा प्रवेश गरेको यानले पठाएको हो । नासाले मङ्गल ग्रहमा अनुसन्धानलाई गति दिइरहेको छ । उसले यान अवतरण गराइसकेको छ भने मानवसहितको यान पठाउने तयारी गरिरहेको छ । एजेन्सी
ट्याग्स: पहिरो, मङ्गल ग्रह